Home /Blog/Dawladda Puntland Oo daah-furtay Mashaariic Biyo xireeno lagu hirgalinayo
Munaasabad lagu qabtay xarunta Wasaardadda deegaanka Dowladda Puntland ee Garoowe ayaa lagu daah furay Mashruuc loogu magac daray horumarinta Biyaha ee hab nololeedka xoolo-dhaqatada iyo beeralayda Puntland.
Waxaana kasoo qaybgalay Xubno kamid ah golaha Wasiiraddda Dowladda Puntland, gudoomiyaasha gobollada, agaasimayaasha qaar kamdi ah wasaaraddaha dowladda, iyo marti sharaf kale oo goobta lagu casuumay,
Waxaana ugu horeyn munaasabadda lagu soo bandigay dukumenyti kusaabsan daraasad laga sameeyey qaab ka loo doortay afar goobood oo mashruucan biya xireenka ahi laga hirgalinayo.
Meelaha mashruucan laga hirgalinayo ayaa waxa ay kala yihiin Laasadawaco, dharroor, Xam,xamaa, iyo Reydable, oo kalala tirsan gobolada Bari, nugal iyo Mudug, waxaana mashruucan oo ay ku baxayso aduun lacageed oo garayaa 1-milay oo doolar maalgalinaya Bankiga Aduunka, waxaana fulinaysa qaar kamid ah wasaaraddaha dowladda oo ay hormuud u tahay Wasaaradda deegaanka.
Qaar kamid ah Gudoomiyaasha Gobollada Puntland oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay ayaa sheegay inay soo dhaweyanayan mashruucan lagu sameynayo biyo xireenada, maadama bulshadu ay baahi weyn u qabto, islamarkaana hadii la hirgelinayo ay meesha ka saari doonto dhibaatoyinka dhanka biyaha ah ee xilligan haysta bulshada kunool deeganada miyiga ah.
Wasiirka shaqada, shaqaalaha iyo ciyaaraha dowladda puntland C/raxmaan Shiikh Axmed ayaa sheegay in masuuliyiinta dowladdu ay ku dadaalayaan in shacabka loo sameeyo barnaamijyo wakhti dheer la manafaacd san karo, isagoona xusay in mashruucan faa’idada kale uu leeyahay ay tahay in shaqo abuur uu u noqdo tiro kamid ah bulshada Puntland.
Wasiirka Deegaanka iyo Dalxiiska iyo duur joogta Puntland Cali C/lahi Warsame oo mashruucan si rasmi ah u daah furay ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay iyo weliba qaabka loo xushay goobaha mashruucan laga hirgelinayo.
Ma ahan markii ugu horeysay oo dowladda Puntland ay mashruuc noocaan oo kale ah ka hirgeliso deeganada miyiga ah, waxaana ay hayd sanadkii tagay markii dowladdu ay ka hirgalisay deegano kakala tirsan magaaloyinka dongorayo iyo Qardho biyo xireeno ceynkaan oo kale ah kuwaa meesha ka saaray dhibaatoyin dhanka biyaha ah oo bulshada hesytay.
Guddoomiyihii gobolka Sool ee Puntland oo geeriyooday